VIDEO: Cristiano Ronaldo wiilkiisa oo goolkiisii ugu horreeyay ku dhaliyay garoonka Santiago Bernabéu - Hablaha Media Network
VIDEO: Cristiano Ronaldo wiilkiisa oo goolkiisii ugu horreeyay ku dhaliyay garoonka Santiago Bernabéu
HMN:- Wiilka da’da yar ee uu Aabaha u yahay weeraryahanka kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo ayaa goolkiisii ugu horreeyey ku dhaliyey garoonka uu Aabihiis ku ciyaaro ee Santiago Bernabéu.
Cristiano Junior ayaa xalay xaday indhaha caalamka intii uu socday dabaal-deggii ay kooxda Real Madrid ku qabsatay garoonkeeda Santiago Bernabéu ee Champions League, kaddib markii uu goolkiisii ugu horreeyey ku dhaliyey garoonkaas.
Real Madrid ayaa xalay u dabaal-degtay koobkeedii 12-aad ee ay kooxda Juventus kaga soo qaaday magaalada Cardiff.
Laakiin wiilka uu dhaliyey CR7 ee Cristiano Junior ayaa inta si wacan u dhexmaray carruurtii yaryarayd ee waalidiintoodu ay keeneen garoonka ee la dabaal-dagayey kooxda Real Madrid dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey ee Santiago Bernabéu.
Waxa uu ahaa gool qurux badan ee halkaan hoose ka daawo goolka Cristiano Junior:-